नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : उहि प्यारी छोरीको दुखी बाउको रोदन : तपाईले पनि त्यो दिन मेरी छोरीको मुख हेरिदिनु होला, नत्र दुर्घटना हुनसक्छ !
उहि प्यारी छोरीको दुखी बाउको रोदन : तपाईले पनि त्यो दिन मेरी छोरीको मुख हेरिदिनु होला, नत्र दुर्घटना हुनसक्छ !
छोरीको जातै मायालु हुन्छ । ओरिपरि झुम्मिरहने । खेलीरहने । बोलीरहने / हाँसी रहने खालका हुन्छ्न ,छोरीहरु । घरबाट फुत्त निस्कन खोज्यो नजानु भनेर हत्ते गर्छ्न । हात समातेर तान्छन । बल्ल बल्ल फकाएर निस्कियो, टाटा बाई बाई गर्छ्न । गालामा मोई खाएर बिदा गर्छ्न । छिट्टै आउनु भन्छन । र , नफर्किदासम्म बाटो हेरेर बसेका हुन्छन । आउने बित्तिकै 'बाबा बाबा´ भन्दै अंगालो हाल्न आईपुग्छ्न । यसो चकलेट दियो । दोब्बर खुशी हुन्छन ।
छोरी हुर्किदै जान्छन । माया झन गाडा हुदै जान्छ । छोरी ठुली हुन्छे, बिहेदान हुन्छ, माया अझै चुलिदै जान्छ । छोरो नाथे हुर्कियो , उहि जाँडरक्सी र अर्काकी स्वास्नीमै मात्र ध्यान दिन थाल्छ । तिनलाई न बाउको इज्जत प्रतिष्ठा प्यारो हुन्छ । न आफ्नो । तर छोरी, अंह सधै बाउको छत्रछायामा हुन्छे । संधै बाउलाई साथ दिन्छे । भनेको मान्छे । आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा बस्छे ।
जसै जसै आफु ओरालो लाग्दै जान थाल्यो , उति उति छोरीको भविस्यको चिन्ता लाग्न थाल्ने रहेछ । आफ्नो शेखपछि के होलानी भन्ने पीरले फुलेका जुँगा झन झन फुल्न थाल्ने रहेछन । इन्दिराको यस्तै चिन्ता , जहवरालाल नेहरु लगेको हुदों हो । बेनेजिरको चिन्ता जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई लागेको हुदों हो । सेख हसिनाको बारेमा , मुजिबुर रहमानलाई लागेको हुंदो हो । स्व्ंयम गिरिजाप्रसाद कोईरालाले पनि , सुजताको खुब चिन्ता गर्ने गर्थे ।
जवान भैइन्जेल , हारे एउटा ज्यान हो , जित्नलाई संसार छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसरी हिडियो पनि । धेरैका सन्तान हारियो पनि र त्यसको मुल्यमा आफ्ना सन्तानका लागी , संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम राखेर एउटा मस्तको संसार जितियो पनि । तर, अब यो जितेको संसार तिनलाई हस्तान्तरण गरेर मर्न पाए , ठुलो उपलब्धि त्यहि हो जस्तो लाग्छ । अब त, छोरीले जिते ,संसार नै हार्दिन्छु जस्तो लाग्छ । बस ! छोरीले चाँहि जित्न परो । त्यो नाबालिकाको चित्त दुखाएर, त्यसको भाग खोसेर हाँसिल हुने सबैकुरा तुच्छ लाग्छ आजकल मलाई । एउटा बाउका निम्ति सिधान्त र नैतिकताका बकमफुसे कुरा भन्दा छोरीले मन पराएर मागेको खेलौना र गुडिया सधैं माथी हुन्छ ।
अन्त्यमा, यहि आउदोँ २०७९ सालको बैसाख ३० गतेका दिन, हामी छोरी दिवस मनाउन गैईरहेका छौं । बाउको मुख हेर्ने / आमाको मुख हेर्ने दिन भएपनि छोरीको मुख हेर्ने दिन छैन । ३० गते छोरीको मुख हेर्ने दिन हो । मैले त मेरी छोरीको मुख सधैं हेरिरहेको छु । तपाईले पनि त्यो दिन मेरी छोरीको मुख हेरिदिनु होला ।
भवदीया - उहि प्यारी छोरीको दुखी बाउ ।
Posted by www.Nepalmother.com at 2:48 PM